3D Camo Ghillie Suit - China 3D Camo Ghillie Suit Supplier,Factory -Fujie ivelan'ny trano
Home » Products » HAZA » GHILLIE fitoriana
1. 3D camo akanjo ahitana faritra dimy seperate: mihanahana mitsiriritra, palitao, headgear, basy Wrap, fitahirizana bag.
2.3D camo ghillie manana ady sy teny hotsaraina headgear saokany andilany ho mora adjustability
3.3D camo ghillie fitoriana palitao: Lasitike andilany sy ny cuffs; mora-anatn'ny anoloan'ny.
4. 3D camo ghillie fitoriana dia mihanahana miandrandra: Lasitike fehikibo amin'ny drawstring fanitsiana.
5. Drawstring paosy entana mora tafiditra ny fitaterana.
6. Lamba cant ho tabataba, rehefa nifindra .
8.Color :ala na oliva maitso, na tany efitra, na ny oram-panala fotsy.
A camouflage fitoriana, fantatra koa amin'ny hoe ghillie ady sy teny hotsaraina, Natao mitovy mavesatra ravina. mpitily, mpihaza sy ny mpaka sary voajanahary mety manao ny camouflage fitoriana ny mifangaro ho ao an-manodidina sy hanafina ny tenany amin'ny fahavalo na lasibatra. Ny fitoriana atao manome an'ilay mitafy azy \_ 's manoritra ny telo-dimensioned fisarahana, fa tsy ny Linear ny iray.
Ny camouflage akanjo ahitana ny palitao, roa ny pataloha sy ny fonosana kitapo.
Camouflage io fitoriana no 2014 New Design izay manana vokany mahafa-po camouflage.
Vita tamin'ny high quality polyester, izany \_ 's tena mateza sy maivana. Afaka mihetsika haingana manao izany ka hanasa azy mora foana ao amin'ny milina fanasan-damba. Misy loko camo roa noho ny safidy. Afaka ihany koa ny hanaovany azy araka ny fepetra voalaza.
1.Mpanjifa no Andriamanitsika,tsara no fiainana.
2.Ny santionany dia ho noho ny maso araka ny fangatahanao.
Hangzhou Fujie Outdoor Products Inc. specializes tamin'ny nanaovany, mpanamboatra sy ny raharaham-barotra isan-karazany ny ivelan'ny trano vokatra. miaraka 20 taona ny orinasa traikefa,haingana, ary afaka hahatakatra mpanjifa indrindra needs.We dia nanolo-tena ho iray-dia aminareo intsony ivelan'ny trano solutiions mpamatsy.
Ny lehibe indrindra dia ny vokatra jono&mihaza vokatra anisan'izany ny fitoriana camouflage,camouflage mihaza kitapo,camouflage mihaza satroka,camouflage mihaza harato,Pu&Nahatsiaro insoles andian-dahatsoratra,akanjo miaramila series,Neoprene kiraro&waders series,kiraro fingotra&waders series,Snow kiraro&Vorondrano Mpanao Dia Lavitra andian-dahatsoratraries,mandehandeha kiraro andian-dahatsoratra.